Sidee Caqliga Iyo Xikmadda Uga Faa’iidaysan Kartaa Ugana Fogaan Kartaa Fashil - Xogside-news
Home BARNAAMIJYADA sidee caqliga iyo xikmadda uga faa’iidaysan kartaa ugana fogaan kartaa fashil
sidee caqliga iyo xikmadda uga faa’iidaysan kartaa ugana fogaan kartaa fashil
Dunida isbadalkeedu waa joogto, fikirka aadamiga mar kasta waxa uu xidhiidh la leeyahay hadba duruufta wehelka u ah. Duruufahaasi is barkan ee laga yaabo inay kakan yihiin waxa qofku ku waajahaa caadifad iyo hawo been ah, iyo caqli karti wehelinayso.
Haddii caadifaddu ay ka dheerayso heerka fikirka caqliga dadaal kasta oo aad bixisaa wuxu ku dhamaada eber, lab la kac iyo cadho ku dhisnaa, markaasi ayaad shakhsiyaad, koox ama deegaan u aragtaa inay duruufaha kugu xeeran sabab u yihiin.
Marar badan waxaad dareemaysa dhawaaq ku leh “ Duruuftan kama gudbi kartid, ilaa aad hesho awood ku taageerta, taasina ma haystid ee iskaga dhex noolow”.
Ilbidhiqsigaasi waa laba midkood inaad fashil noqoto oo aad aqbasho inaad iskaga dhex noolaato inta ay geeridu kuu imanayso, iyo inaad caqliga iyo xikmadda ka faa’iidaysato oo aad siiso jawaab ah “ Maya waan ka gudbi kara, anigoon taageero cidna ka sugin, laakiin daariiqa aan marayo waa mid aan anigu jeexanayo oo aan ka fikiray halka uu I geynayo” Odhaahdaasi waa kan ay shakhsiyaad iyo ummado badan horumar ku gaadheen.
Waa inaad ka xorowdo cabsida wahsiga, caajiska iyo fadhiidnimada caqliga, oo ah isha ay ka soo burqato saboolnimada iyo nolol xumidu.
“Every man is a creature of the age in which he lives and few are able to raise themselves above the ideas of the time.” “ Qof kasta waa hal abuure noloshiisa ah, laakiin dad yar ayaa awood u leh inay nafahood kor uga qaadaan fikradaha wakhiga.
Previous articleWaxyeelada uu leeyahay fikirka badan
Next articleMagaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo qeybo ka mid ah dalka waxaa maanta si rasmi ah uga billowday imtixaanka Shahaadiga ah ee Dugsi Sare